Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi Njem Anguilla » Anguilla kwupụtara na imeghe ókèala May 25
Silver Airways laghachiri na mbara igwe na Anguilla
Anguilla belatara oge iche iche maka ndị ọbịa na-agba ọgwụ mgbochi zuru oke na mba ahụ na-amalite na Tuesday, May 25, 2021.
Mgbe mmechi ọnwa ọnwa n'ihi ụyọkọ ikpe nke COVID-19, Anguilla dị njikere imeghe n'otu izu na ọkara.
Oge ịgbapụ iche maka ndị njem na-agba ọgwụ mgbochi zuru ezu belatara ruo ụbọchị 7.
A kọwara oke ọgwụ mgbochi zuru oke dị ka ịnara ọgwụ ikpeazụ nke ogwu ahụ opekata mpe izu 3 tupu ị rute n'àgwàetiti ahụ.
Taa Gọọmentị nke Anguilla kwupụtara na ókèala agwaetiti ahụ ga-emepeghachi nye ndị ọbịa na May 25, 2021. Nke a na-esote mmechi nke ọnwa maka njikwa arụmọrụ nke ụyọkọ nke ikpe COVID-19 na-arụ ọrụ, nke a chọpụtara na Eprel 22.
N'ihe banyere njigide nke ụyọkọ ụyọkọ a na-adịbeghị anya, na usoro ịgba ọgwụ mgbochi na-aga n'ihu n'àgwàetiti, Gọọmentị nke Anguilla emeela ka oge iche iche pụọ na ụbọchị asaa (7) maka ndị ọbịa na-agbachapụ kpamkpam. nke pụtara ndị ọbịa ndị nwere ọgwụ mgbochi ikpeazụ ha nyere opekata mpe izu atọ tupu ha abata na agwaetiti ahụ.
“Anyị nwere nsogbu nwa oge mgbe anyị kwesịrị imechi ókèala anyị n'April 22,” kwupụtara na Hon. Omeiwu Ome Iwu nke Omeiwu, Oriaku Quincia Gumbs-Marie. “Anyị mere ihe ọsọ ọsọ ma mejuputa ọtụtụ usoro iji chịkwaa ma nwee ụyọkọ nje a, yana ịgbasawanye ọgwụ mgbochi. Ihe si na ya pụta bụ na anyị nwere obi ike na anyị nwere ike ịmaliteghachi ugbu a n'enweghị nsogbu ma chebe ahụike nke ndị bi na ndị ọbịa.
Ihe ndị ewepụtara na mbụ ga-anọgide: